100 Kununura Kunamata kunopesana nemhare yemba yababa vangu nemaitiro akaipa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato 100 Kununurwa Kunamata kunopesana nemhare yemba yababa vangu nezvakaipa ...
100 Kununura Kunamata kunopesana nemhare yemba yababa vangu uye yakaipa maitiro
17 Asi pagomo reZiyoni pachava noruponeso, uye pachava neutsvene; uye veimba yaJakove vachagara nhaka yavo.
Nhasi tiri kutarisa zana Kununura Munamato kupikisana nemhare yemba yababa vangu uye maitiro akaipa. Hatife takarega kunamatira tichipesana nevarume vakaipa vane simba uye maitiro akaipa mumhuri medu. Munhu akasimba kupikisa kwemadhimoni mumhuri, achivasunga vakasungwa nekuvachengeta muhupenyu husingaperi hwehurombo, kudzikira, kurwadziwa, kudzoka etc. Kuburikidza nesimba muzita raJesu, munhu wese akasimba anogona kukundwa nekugara pasi. Semwana waMwari, haufanire kunge usingazive zvishandiso zvevavengi, unofanirwa kunge uchinamata, unofanirwa kuzvinunura uchishandisa iyi minamato yekununura. Varume vakasimba mweya yakasindimara, uye ivo vanokwanisa chete kukundwa nekutenda kusindimara. Neiyi minamato yekununura, ndinokuona uchisunga murume akasimba kubva kuimba yemadzibaba ako muzita raJesu.
Kechipiri isu tine maitiro akashata, izvi zvakaipa kurangarira zviitiko mumhuri kubva kuchizvarwa kusvika kuchizvarwa. Semuenzaniso dzimwe mhuri dzinogara dzichifa zvisingatarisirwi pamakumi mana, uye izvi zvinoramba zvichienderera kubva kuchizvarwa kusvika kuzvizvarwa, vamwe havagare muwanano ndipo pane vakadzi vanoroorwa vanogara vachipedzisira vasiya varume ipapo, iyi zvakare muenzaniso. Imwe ndiyo nzira yehurombo, kuva nevana kunze kwekuroora, kunonoka kuroora, kunonoka kubata pamuviri, nezvimwe zvese izvi zvakashata maitiro mabasa adhiabhorosi. Ndinokukurudzira kuti ubatanidze uyu Munamato weKununura uchipesana nemurume akasimba wemba yababa vangu uye mapatani akashata kuti uzvibvise iwe wakasununguka pane ino yakaipa maitiro. Yese yakaipa patani idenderedzwa yakaipa uye inogona kutyorwa kuburikidza nesimba muminamato yako. Namata nekutenda nhasi, zviburitse kubva pakubata kwemasimba uye nemaitiro akashata kamwe nekusingaperi muzita raJesu.
1. Ini ndinoraira vese vane masimba uye maitiro akashata muhupenyu hwangu kuti ubude uye uende ikozvino, muzita raJesu.
2. Ini ndinosunungura moto wegonyeti dzvene kune wese munhu akashata mumba medzita rangu nemuzita raJesu.
3. Ndinotyora denderedzwa yega yeipi yakaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu.
4. Ndinoraira kuti denderedzwa rakaipa riripo mumhuri yangu ripuwe, muzita raJesu.
5. Rega gadziriro yemuvengi imise izvo zvishamiso zvangu kuti zvipuwe zvidimbu, muzita raJesu.
6. Ropa raJesu ngaridzore nzvimbo yepamutemo muvengi ane kwandiri, muzita raJesu.
7. Ini ndinovhara misuwo yese yekufambira mberi kwangu kwakazarukira kumuvengi nekusingaperi neropa raJesu.
8. Ini ndinoraira kuti nhare yese yemuvengi muhupenyu hwangu ibviswe, muzita raJesu.
9. Ini ndinoraira mazwi ese anopesana neshoko raMwari rakataurwa pamusoro pangu kuti riwire pasi pasi uye risingabereki chibereko, muzita raJesu.
10. Rega rimi muvengi wemweya wangu riparadzwe, muzita raJesu.
11. Ini ndinozviparadzanisa kubva kumadziro ese emadzitateguru kusvika kune yakaipa pststs muzita raJesu.
12. Ini ndinosuka muchetete wese wa satan muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
13. Varume vese vakaipa veimba yababa vangu vakaungana kuzorwa neni kuti vatange kuparadzira uye kusazombotangazve muzita raJesu.
14. Rega nzira yakaipa ngairambe neupenyu hwangu iparadzirwe nekutinhira kwaMwari uye usazombotangazve kundirwisa muzita raJesu.
15. Ini ndinozvisiyanisa nechero kubatana kubva kumasimba emadzitateguru muzita raJesu.
16. Ini ndinotyora simba rechero dhimoni rinopihwa rinopokana nehupenyu hwangu, muzita raJesu.
17. Ini ndinomesa masimba ese akaipa kunonoka zvishamiso zvangu, muzita raJesu.
18. Rega kuzodzwa kweanokunda kukunda kuwire nesimba paupenyu hwangu, muzita raJesu.
19. Rurimi rwangu ngaruve chinhu chekubwinya kwaMwari, muzita raJesu.
20. Maoko angu ngaave chishandiso chebudiriro yeuMwari, muzita raJesu.
21. Meso angu ngaave chishandiso chakaratidzwa naMwari, muzita raJesu.
22. Vese vadzvinyiriri vangu ngavatore maperembudzi okutonga kwaMwari, muzita raJesu.
23. Ndinobvisa zita rangu kubva pakurongwa kwekufa kusati kwaitika, muzita raJesu.
24. Rega kushatisa kwakashata kubve kunze kwehurongwa hwangu, muzita raJesu.
25. Iwe murume akaipa, ndinokuraira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sunungura runako pakurarama kwangu.
26. Iwe satani wakaipa maitiro, ndinokuraira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
27. Imi vamiririri vehurombo ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sununguka kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
28. Imi vamiririri enhumbi dzomweya, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sununguka kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
29. Imi vamiririri vekukundwa, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
30. Imi vamiririri veutera, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sununguka kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
31. Imi vamiririri verusununguko, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sununguka kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
32. Imi vamiririri vanononoka madhimoni, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
33. Imi vamiririri vevhiringidziko, ndinokurayira muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sununguka kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
34. Imi vamiririri vekusadzokera kumashure, ndinokurayira, muzita raIshe wedu Jesu Kristu, sunungura kubata kwako pamusoro pehupenyu hwangu.
35. Chose chiridzwa chakakundirwa chakanangana neni, chiparadzwe, muzita raJesu.
36. Chishandiso chero chipi zvacho chehondo dzaSatani dzakagadzirirwa kundirwisa, ngadziparadzwe, muzita raJesu.
37. Chose chiridzwa chorufu chakagadzirirwa kundiparadza, chiparadzwe, muzita raJesu.
38. Chishandiso chiri chose chesatani satanic uye makamera akagadzirirwa kundirwisa, ngaaparadzwe, muzita raJesu.
39. Chishandiso chiri chose chesatani chakashata chakamisidzana neni, ngachiparadzwe, muzita raJesu.
40. Chishandiso chero chipi zvacho chemahara satanic uye maakaunzi kwandiri, ngaparadzwe, muzita raJesu.
41. Rega moto weMweya Mutsvene utange kuyerera kuyerera murwizi rwangu reropa, muzita raJesu.
42. Rega dhipo radhiabhori riri kupesana nezvakandibatsira riite kunze, muzita raJesu.
43. Ndinoparura nhengo dzose dzemukati mumuviri wangu kubva muchibvumirano chose chakaipa, muzita raJesu.
44. Ini ndinosunungura hupenyu hwangu kubva pamaoko ewaimbove shamwari yemashiripiti, muzita raJesu.
45. Rega satanic depositi yakawanikwa kubva mukudhakwa yakaipa ibudise kunze kwemuviri wangu system izvozvi, muzita raJesu.
46. ​​O Ishe, kurumidzai Izwi renyu kuti muite muhupenyu hwangu muzita raJesu.
47. Ini ndinosarudza kupedzisa kumakomborero ese anowanikwa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
48. Ini ndinozvisunungura pane chero hukama hwakaipa hwakaitirwa kwandiri neumwe mweya wedhimoni, muzita raJesu.
49. Ini ndinosunungura hupenyu hwangu kubva kuhusungwa hwese hunobva kuzvikanganiso zvakapfuura, muzita raJesu.
50. Rega zvakaipa zvese zvekutsvaga rubatsiro kubva kuIjipita zviitwe zvachose, muzita raJesu.
51. Rega kukanganiswa kwezvinhu zvakashata zvakasangana nehupenyu hwangu zviitwe, muzita raJesu.
52. Ita kuti nhengo dzese mumuviri wangu dzigamuchire kubata kwaMwari uye kushande zvakazara, muzita raJesu.
53. Ini ndinoramba mweya yega yega yekusakwana, muzita raJesu.
54. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwekuda kusunganidzwa, muzita raJesu.
55. O Ishe, ronga zvakare hupenyu hwangu kuti ugamuchire makomborero mazhinji muzita raJesu
56. O Ishe, vhurai hupenyu hwangu kuti mugare kubwinya Kwenyu muzita raJesu
57. Chero chii zvacho muhupenyu hwangu, chandiri kuziva kana kusaziva, chandinonoka chinodikanwa changu, ngachiparadzwe izvozvi muzita raJesu.
58. Rega hupenyu hwangu husunungurwe kubva pane yakaipa yega yega zita raJesu.
59. Ishe, itai hupenyu hwangu chibereko uye muropafadze chibereko chebasa rangu muzita raJesu.
60. Rega muviri wangu system isvibise vavengi, muzita raJesu.
61. Ini ndinoramba mweya wese wekunyadziswa mune zvemari, muzita raJesu.
62. Rega simba ritange kuchinja maoko mumari dzangu, muzita raJesu.
63. Ini ndinozvisunungura kubva kune chero kutuka kwemhuri kusimbisa matambudziko emari, muzita raJesu.
64. Ini ndinodzima basa rakaipa rekushandisa mari yangu, muzita raJesu.
65. Masimba ese ane mari yangu ngavasunungure ikozvino, muzita raJesu.
66. Ini ndinoburitsa mari yangu kubva ku cage yeipi yakaipa maitiro muzita raJesu.
67. Ini ndinozvisunungura kubva kune chero chakaipa chinotamisa mweya yemweya yekukwira kumusoro, muzita raJesu.
68. Rega roga roga dhimoni rehupenyu hwangu hwemari ngaruitwe, muzita raJesu.
69.Mweya Mutsvene, wedzera mari yangu, muzita raJesu.
70.Mweya Mutsvene, rega ini ndiwane kufashukira mumari yangu, muzita raJesu.
71. Ini ndinoramba mweya wetsvina muhupenyu hwangu muzita raJesu.
72. Ndinozvibvisa pane chero kukokwa neshamwari dzemadhimoni, muzita raJesu.
73. Ndinotenderedza mari yangu nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
74. O Ishe, ndinzwirei tsitsi pamberi penyu nguva dzose muzita raJesu
75. Ishe, ndipeiwo kuvonekwa kwemweya kwaizofambisa hupenyu hwangu muzita raJesu
76. O Ishe, zunzai matenga nepasi uye muite mashura angu andiwane nhasi muzita raJesu.
77. O Ishe, zunzai matenga nepasi uye muunze kwandiri mafambiro angu vabatsiri kwandiri muzita raJesu.
78. Ndakakanda dambudziko rangu rose muGungwa Dzvuku, muzita raJesu.
79. O Ishe, zorodzai uye mundipe simba muzita raJesu
80. Rega kuzodzwa kwoutsvene kuwire pamusoro pangu, muzita raJesu.
81. Ini ndinayo gedhi remuvengi nhasi, muzita raJesu.
82. Ndinozvida zvese zvandinowana, muzita raJesu.
83. Ini ndinozivisa kuti njere dzaMwari dziri kushanda mandiri muzita raJesu.
84. Ini ndinozivisa kuti ndakasununguka kubva kune wese murume akasimba uye yakaipa maitiro muzita raJesu.
85. Ishe, itai ruzhowa rwemoto kuti ndichengetedze mhuri yangu, zvinhu uye nekurarama muzita raJesu.
86.Ishe, tuma vatumwa vako kunondimirira kuti vatore nzvimbo dzakaipa dzichitenderedza hupenyu hwangu muzita raJesu.
87. Ini ndinozivisa kuti Kwese kurwisa nemiteyo yemuvengi muhupenyu hwangu, zvinokanganiswa, muzita raJesu.
88. Ini ndinofamba muchengetedzo dzamwari uye ndinoramba kupinda mumambure evavengi, muzita raJesu.
89. O Mwari, ivai chivando changu uye mundichengetedze kubva kune zvakaipa munzvimbo dzose dzehupenyu, muzita raJesu.
90. Mwari ndipotei nenziyo dzekununurwa, muzita raJesu.
91. Ini ndinokunda zvakaipa nezvakanaka muhupenyu hwangu uye munzvimbo yangu, muzita raJesu.
92. Ini ndinokunda kutya nekutenda muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
93. Ini ndinopa matambudziko ese akaipa kubva kumunhu akasimba uye maitiro akaipa pamusoro pehupenyu hwangu asina simba, muzita raJesu.
94. Rega moto wako uparadze uye uparadze mweya wangu wemweya wemasimba akaipa, muzita raJesu.
95. Ini ndinozivisa kune anotumira miseve yose yemhare yakanangwa kuhupenyu hwangu, muzita raJesu.
96. O Ishe, ndinokutendai nekundigadzirira nzira yekutiza kubva kune mumwe akasimba mune zvekunamata uye yakaipa maitiro muzita raJesu.
97. O Ishe, ndinokutendai nekununurwa kwangu kwakakwana kubva kune wakaipa wese akashata nemaitiro akaipa ezita raJesu
98. O Ishe, ndinokutendai nekuti ini ndakasununguka kubva kune chero munhu akashata akaipa neese maitiro akaipa kubva kuimba yababa vangu muzita raJesu
99. Ndatenda Jesu anotapira nekundipa kukunda.
100. Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
Previous nyaya40 Kununurwa Munamato Kubva Kunonoka Kuroora
inotevera120 Pfungwa dzeMunamato Yezve Kudzoreredza Kubwinya Kwakarasika
Mayte Portela mejia June 2, 2021 Pa 6: 28 am
Ncesito oración mi matrimonio siempre hay contienda repetición sin causa justificada, ha vuelto un infierno .por fe estado esperando dios cambie mi esposo hombre de Dios, como esposo, amigo y compañero.
Abhigaeri June 29, 2021 Pa 12: 58 am
100 Munamato wekuti Utyisirwe Kusuwa
Simba Resimba Rinofambisa minamato yeMinamato